[APK] Ny emulator NES tsara indrindra sy lalao angano 7 | Androidsis
Francisco Ruiz | | apk, Fampiharana Android, Emulators, Lalao Android
Taorian'ny faran'ny herinandro lava izay tsy nahafahako nampakatra atiny tao amin'ilay Fantsona horonantsary Androidsis, androany dia tsy maintsy nitondra zavatra tsy manam-paharoa toa anao amin'ilay fampiharana hatolotro anao anio aho, fampiharana izay heverin'ny maro ho ny emulator NES tsara indrindra ho an'ny Android.
Saingy tsy mijanona eo ilay zavatra satria ankoatra ny fizarana ny rakitra apk an'ilay emulator NES voalaza etsy ambony sy ny iray hafa Nintendo emulator ho an'ny Android, ho fanampin'izay, ao amin'ny rakitra ZIP izay ho hitanao amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitanao ihany koa lalao fito kilasika sy angano NES. Ho fanampin'ny afaka milalao lalao amin'ny endrika .nes alaina avy amin'ireo tranonkala marobe nozarain'ny Roms ho an'ny Nintendo NES.
Ny fampiharana lazaiko dia fampiharana izay antsoina tsotra fotsiny nes ary tsy maintsy manao izany isika misintona mivantana avy amin'ity rohy ity ihany satria tsy misy io ao amin'ny Google Play Store, fampiharana tsy misy viriosy na malware toy ny Izaho manokana dia namakafaka azy tamin'ny virustotal ary nanome valiny 0/0.
Safidy iray hafa alaina ho fanampin'ilay rohy navelako teo ambonin'ireto tsipika ireto ihany, mahita azy ianao amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny vondrona Androidsis amin'ny Telegram, un vondrona chat izay misy mpampiasa efa ho 2400 izay isan'andro dia mizara fampiharana, fahalalana ary mifanampy isika. Eo indrindra amin'ny vondrona dia ho hitanao koa ity apk miampy ireo lalao fito misy ny fonosana. Izany rehetra izany dia ao anaty rakitra zip voafintina.
Fa ahoana no hametrahako ny apk sy ny lalao?
Raha vantany vao alaina ny rakitra voafintina amin'ny endrika ZIP, dia hofongorinay miaraka amin'izay mpikaroka rakitra izany ary hanome antsika izany apk fisie ho an'ny fametrahana fampiharana ary fampirimana misy ireo lalao fito mahazatra NES.
Ny voalohany dia ny handeha Fikirana Android ary amin'ny safidin'ny Security dia alefaso ny boaty misy loharano tsy fantatra na fiaviana tsy fantatra. Raha vantany vao vita izany dia afaka manindry ny apk NES isika ary hanaiky ny fametrahana ny rindranasa.
Rehefa apetraka tsara ny rindranasa dia azontsika atao ny mampandeha azy amin'ny alàlan'ny fanindriana ny kisary izay hiseho ao anaty vatasarihana fampiharana an'ny Android antsika, ary amin'ny efijery voalohany izay miseho. mankanesa any amin'ny lalana izay nanononanay ny zip-zip ary ho hitanao ny fampirimana lalao ho an'ny NES.
Amin'ity rohy manaraka ity dia azonao atao misintona ny lalao NES maimaimpoana
Ny fizotrany dia tena tsotra sy tsotra ary tsotra, na dia tafiditra ao aza ianao ary tsy mahalala ny fomba hanaovana azy, ao amin'ilay horonan-tsary niraikitra izay navelako teo am-piandohan'ny lahatsoratra dia azavaiko ny fizotry ny fametrahana, ny fampiharana ny fampiharana ary ny fomba filalaovana ny lalao voalohany NES avy amin'ny Android.
Ny fonosana NES ho an'ny Android ankoatra ny fampidirana ny apk NES dia misy ireto lalao fito ireto ihany koa:
Donkey Kong kinova voalohany
Mpiady an-dalambe 2010
Kinova Sonic tany am-boalohany
Araho hatrany ny fantsona Androidsisvideo sy ny bilaogy Androidsis rehefa manomana lahatsoratra video izay hasehoko anao aho ny pejy tsara indrindra hampidinana lalao mifanaraka amin'ity emulator NES tsara indrindra ho an'ny Android. Oh ary mazava ho azy fa maimaim-poana tanteraka, azo antoka ary avy amin'ny finday avo lenta ireo rehetra ireo !!.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » [APK] Ny emulator NES tsara indrindra sy ny lalao angano 7
Mitovy amin'ny zava-drehetra izy io ary mampalahelo ny baddies rehetra alaina amin'ny finday. Tsy maintsy lalaovina amin'ny fahitalavitra sy amin'ny bokotra lavitra ny bokotra. Tsy tapaka ho an'ny chonis izy io
Nosintomiko ny fampiharana nes maimaimpoana ary tamin'ny ankamaroan'ny lalao nes ary tsy nisy fahasarotana tamin'ny fisie apk
Nicolas Torres dia hoy izy:
Misaotra betsaka sakaiza, tsara be ianao! Arahaba avy any Chile!
Valiny tamin'i Nicolás Torres
Ny rehetra momba ny Moto Z2 Force: fampahafantarana, vidiny ary misy
Tolotra Leagoo KIICAA Power amin'ny vidiny 51,87 euro fotsiny. Mihazakazaka reraka ry zareo !!